Iindaba -Yintoni esweni ukubetha kwentliziyo?
Oko kubizwa ngokuba liliso lokubetha kwentliziyo ngumlindo onokurekhoda ngokuchanekileyo ukubetha kwentliziyo yethu ngexesha lokwenyani ngexesha lokuzilolonga. Indima yokubeka esweni ukubetha kwentliziyo ekusebenzeni okunenjongo icacile.
Kukho imigaqo emibini eqhelekileyo yomlinganiso wetheyibhile yentliziyo, enye yindlela yokulinganisa yangoku yentliziyo, kwaye enye yindlela yokulinganisa ukuhanjiswa kweefoto.
Imilinganiselo yangoku ye-Cardiac
Umzimba wethu womntu uya kuvelisa intliziyo yangoku ngalo lonke ixesha intliziyo ibetha, ibhendi yentliziyo engenazingcingo ibhendi yesixhobo esinokuthi siyiqonde imeko yangoku yentliziyo. Inxalenye pole woluvo ibekwe kumacala omabini ngaphambili ngaphambili esifubeni band. Emva kokuba umsebenzisi enxibe ibhanti yesifuba, isiqwenga sepali kwibhendi yesifuba siqokelela ukuhla kokunyuka kwentliziyo yomntu osetyenziswayo, emva koko siyithumele kwimitha yokubetha kwentliziyo ngokusebenzisa itekhnoloji yokuhambisa ngaphandle kwamacingo ukuyiguqula ibe lixabiso le-BPM yenqanaba lentliziyo. ukujonga ngokulula. Okwangoku, le yeyona ndlela iphambili kwaye ichanekile yokulinganisa izinga lokubetha kwentliziyo ngexesha lokuzilolonga.
Umgaqo uyafana nowe-electrocardiogram. Olunye uncedo lwale ndlela yokulinganisa ukubetha kwentliziyo kukuba inokulinganiswa ngokuqhubekayo ngexesha lokuzilolonga.
Indlela yokulinganisa ukuhanjiswa kweefoto
Imilinganiselo yefotoelectric isebenzisa utshintsho ekufunxweni kwehemoglobin kwimithambo yegazi ukulinganisa ukubetha kwentliziyo. Iwotshi ixhotywe nge-infrared beam loop kunye nokufumana kunye nokubonisa iluphu. Uncedo lwale ndlela kukuba kulula kakhulu ukulinganisa ukubetha kwentliziyo ngaphandle kwebhendi yesifuba. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba uphawu lubuthathaka kwaye kulula kakhulu ukuphazanyiswa lihlabathi elingaphandle, idatha yomlinganiso ayichanekanga, kwaye ifuna ukulinganiswa ngokubanzi kwimeko ethe cwaka, ngenxa yoko ayikulungelanga ukulinganiswa okuqhubekayo kwenqanaba lentliziyo ngexesha ezemidlalo.
I-Photogrammetry yokuKhanya okuLuhlaza iqukethe ukukhanya okuluhlaza okhupha i-LED kunye nesenzi sokubona sefoto esibekwe ngasemva kokubeka esweni ukubetha kwentliziyo. Umgaqo-siseko usekwe kutshintsho kuxinano lwemithambo yegazi engalweni ngexesha lokutshiza, kukhokelela kutshintsho kuthumelo lokukhanya. Ukukhanya kwe-LEDs kukhupha ukukhanya kwe-green wavelengths, kunye ne-photosensitive sensors zithatha ukukhanya kubonise kulusu lwengalo kwaye zilinganise utshintsho kubunzulu bentsimi yokukhanya kwaye ziyiguqule ibe kukubetha kwentliziyo. Itekhnoloji ngoku isetyenziswa yi-Mio Alpha, iFitbox HXM kunye neAdidas Smart Run yokubek 'esweni kwentliziyo e-US. Ukukhanya okuluhlaza kokukhanya kwemilinganiselo yokubetha kwentliziyo kuyishiye ngokupheleleyo ibhendi yesifuba sebhendi, kwaye inokuqhubeka ukulinganisa ukubetha kwentliziyo, ukubala umndilili wokubetha kwentliziyo, ukurekhoda umlinganiso wentliziyo ephezulu, ukuseta ixesha lokubetha kwentliziyo.
Icandelo eliphambili kuthotho lwempilo ukuya kuthi ga kwiimowudi zokuzilolonga ezili-18. Imowudi yokuzivocavoca isekwe kwimeko yabo yomzimba kuvavanyo oluzenzekelayo kuluhlu lomgangatho wentliziyo. Iqinisekisa ukuba konke ukuzilolonga okwenzayo kuyasebenza kwaye kukhuselekile.
Unokusebenzisa izinto ezimbini ezizodwa zokuqhubela phambili kwenqanaba lendawo yentliziyo ngokusekwe kwiinjongo zakho zokomelela komzimba. Ukongeza, i-Fitness Series iza nebhendi ebukekayo yesilicone ebonelela ngokuchanekileyo, ngexesha lenene ngolwazi lwenqanaba lentliziyo ngexesha lokuzilolonga kwakho. Uthotho loluntu kuluntu uninzi lwabathandi bomzimba, uqoqosho, lukhetho lwakho lokuqala.
Ngokuqinisekileyo kufuna ukuzimisela kunye nenkalipho ukuze ube imbaleki efanelekileyo.
Ukuba ufuna ukwenza ngcono, kuya kufuneka usebenzise intloko. Imonitha yokuSebenza kwentliziyo ebalekayo iguqula ulwazi lube sisantya, esinokukunceda ukuba ufezekise ukusebenza ngokukuko kwaye uphephe ukubila nantoni na ngexesha lokuzilolonga kwakho.
Inokujonga ngokuchanekileyo ukubetha kwentliziyo, umgama wokuhamba ngebhayisikile, isantya, amaxesha emipu, ukuphuma kwamandla kunye nemephu yendlela.
Yenza ukuba ukhulule amandla aphezulu njengembaleki eqeqeshiweyo.
Uthotho loLawulo lobunzima
Yenzelwe wena. Iya kulungelelanisa inkqubo yolawulo lobunzima kuwe, ikuxelele ukuba ungakanani na ubunzima obufanele ukuba uphulukane nabo kunye nendlela kwaye nini. Ngokubalulekileyo, esweni ukubetha kwentliziyo kuya kukugcina kuluhlu lwe-bullseye, esisikhokelo somzimba.
Logama nje uyinxiba esihlahleni kwaye ulandela nje iingcebiso zenkqubo yonke imihla, unokufikelela kancinci kubunzima bakho obufanelekileyo. Iya kukukhuthaza kwaye ikuncede uhlale ukhuthazekile. Kulula ukuyisebenzisa kwaye igcina inkqubela yakho yonke imihla kunye neveki. Inokukunceda ufezekise kwaye ugcine ubunzima bakho obufanelekileyo, kukuvumela ukuba ufezekise iziphumo zomzimba ezihlala zihleli.